EyeDwarha 10, 2018 admin
lungquzulwano crypto exchange waseKhanada kwibhanki phezu $ 22m kwiingxowa kungahlala
QuadrigaCX, inkulu exchange cryptocurrency Canada uye alelwe ukufikelela kwi CA yezigidi $ 28 imali yayo kuhlala Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ukususela ngoJanuwari 2018. IKHAMPANI, esekelwe e Vancouver iye yasabela ngomsindo emva ibhanki isigqibo ngumkhenkce akhawunti eziliqela isetyenziswa iprosesa yentlawulo Quadriga kaThixo.
The Globe and Mail ingxelo ukuba CIBC emkhenkceni le akhawunti alandelayo lingakwazi ukuqinisekisa abanini yokwenene imali kwaye ucele inkundla ukuba ilifa mali ekuthethwa. Uxwebhu inkundla ucaphula lo iqonga yorhwebo wayebongoza loo nkundla ukuba engabumbeki oko sasichaza njengoko “liyavumelana lungaqinisekiswanga kwaye invidious ukuba ukuthenga ezingaqondakaliyo.”
IMF imiba siluleka phezu Bitcoin kunye crypto “ukukhula ngokukhawuleza”
I-International Monetary Fund iye angazenza “ukukhula ngokukhawuleza” of Bitcoin kunye asethi cryptocurrency ezinokuvula “semngciphekweni ezintsha kwindlela yolawulo-mali lwamazwe ngamazwe,” neebhanki zehlabathi ulungise lwakutshanje Bitcoin kunye yachuma blockchain. Bitcoin and cryptocurrencies, kuquka Litecoin nabanye, ihlolwa liSebe inkqubo zemali yemveli ukuze azivele ukuba ukuze ihlanganiswe njani njengoko zombini izixhobo investment kunye neendlela ukuba imali kwimida ngokukhawuleza yaye kubize.
“iintanda lokhuselo nokuhlaselwa intanethi kwizibonelelo zemali ezibalulekileyo zingumthombo eyongezelelweyo umngcipheko kuba kokuba kujongela iinkqubo intlawulo cross-umda baphazamise ukuhamba kwempahla neenkonzo. Ukukhula ngokukhawuleza asethi crypto ezinokuvula semngciphekweni ezintsha kwindlela yolawulo-mali lwamazwe ngamazwe,” ngokutsho yakutshanje ingxelo World Economic Outlook le fund, namhlanje.
central yebhanki Singapore luya kunceda zokuqala crypto akhawunti zebhanki evulekileyo
I-Wemali Authority of Singapore (KODWA), bank umzi-sikarhulumente central, isebenzela ukuqinisekisa zokuqala cryptocurrency bafumana iinkonzo zebhanki yasekhaya njengenxalenye yeenzame yelizwe yokunyusa uphuhliso fintech.
Ravi Menon, zeziko kuMlawuli Ophetheyo, Uthe yibhanki eyongameleyo uzama “kuzisa iibhanki kunye zokuqala cryptocurrency fintech kunye ukuze ubone ukuba kukho banako ukufikelela oluthile… Uhlobo le shishini kancane eyahlukileyo, ngoko iibhanki kusenokufuneka ukuqesha ezinye iindlela apho zingaqinisekisa ezinyanisekileyo.”
Coinbase mvume Japanese crypto exchange nentembelo kokufika 2019
Isigqeba abaphezulu exchange crypto US ezisekelwe Coinbase uthe uqinisekile siqinise uya kufumana iphepha-mvume lokusebenza in Japan kunyaka ozayo, nakuba nabalawuli kweli lizwe eyandisa kuhlolwe kokutshintshiselana crypto.
mike Lempres, nkqubo igosa eliyintloko Coinbase, wathi inkqubo angalifumani iphepha-mvume “zihamba kakuhle” ne Financial Agency Services. Waleke ngelithi nkampani “izimisele kokuba kwenziwe [ezizobe] ngokuqinisekileyo ibe ngo-2019… Urhulumente Japanese ligxile kakhulu kwi yokhuseleko, oko kulungile kuthi.”
Post Previous:Blockchain News 09.10.2018